Laascaanood: Booliska oo ka hadlay Qarax xalay khasaare keenay | Somaliland.Org
December 27, 2009	Laascaanood (Somaliland.Org)- Wiil dhalinyaro ah, ayaa ku dhaawacmay qarax xalay fiidkii ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Taliyaha qaybta Booliska Sool Mr. Maxamed Saleebaan Gooni, qaraxaasi waxa uu ka dhacay dhinaca Bari ee magaalada Laascaanood. “Qaraxaasi wuu jiraa. Markii Salaada Maqrib la soo tukaday ayuu qarax ka dhacay meel magaalada geeskeeda dhinaca Bari ah. Markaa wiil baa ku dhaawacmay oo firidh baa Lug iyo meelo kale ka galay,” ayuu yidhi Taliyuhu oo u waramay Wargeyska Ogaal. Wuxuuna intaa raaciyay; “Markaa wiilka dhaawaciisuna aad buu u sahlan yahay, wax kale oo dhib ahina ma jiraan oo waa intaas uun.”
Mar la waydiiyay nooca qaraxaas, waxa uu ku jawaabay; “Horta, adeer habeenimona way ahayd (xilliga qaraxu dhacay), imikana baadhis baa socota. Markaa berri (maanta) ayuun baanu kala xaqiijin karaa, laakiin hadeer ma odhan karo noocaas buu ahaa.”
Sidoo kale, mar la waydiiyay inay jirto cid ay u qabteen, waxa uu si kooban u yidhi; “Maya – ma jirto cid loo qabtay.”
Muddo haatan laba bilood laga joogo, waxa qarax nooca Miinada gacanta laga hago ah lagu dilay Taliyihii Ciidanka Milateriga ee qaybta 12aad Marxuum Cusmaan Yuusuf Nuur, xilli uu marayay gudaha magaalada Laascaanood, waxaana kiiskaas u xidhan dad uu ka mid yahay Taliyaha Sirdoonka gobolka Sool Cabdifataax Muuse Yuusuf.